ဂိမ်း Application အမျိုး ၆၀ ကို Play store မှထုတ်ပယ်လိုက်တဲ့ Google! – AsiaApps
ဂိမ်း Application အမျိုး ၆၀ ကို Play store မှထုတ်ပယ်လိုက်တဲ့ Google!
January 22, 2018 January 22, 2018 MoonApp NewsNo Comment on ဂိမ်း Application အမျိုး ၆၀ ကို Play store မှထုတ်ပယ်လိုက်တဲ့ Google!
ပြီးခဲ့တဲ့ သောကြာနေ့က အသုံးပြုသူများထံ ရာဂစိတ် နှိုးဆွစေသည့် ဓာတ်ပုံများ ဖော်ပြသည့် applications များကို Security Researchers များမှ ဖွင့်ဟပြောဆိုခဲ့သည်။ ထို Application အများစုသည် ကလေးငယ်များအတွက် ရည်ရွယ်ထားသည့် ဂိမ်းအများစုဖြစ်သည့်အတွက် Play Store မှ ဖျက်ဆီးပစ်ရခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ရာဂစိတ်နှိုးဆွသည့် ဓာတ်ပုံများ (Porn) ဓာတ်ပုံများသည် Google ၏ ကြော်ငြာ Ads တွေမဟုတ်ဘဲ မလိုမုန်းထားသူတွေရဲ့ နှောက်ယှက်ချက် တွေသာဖြစ်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီဘက်က လည်း အသက် ၁၃ နှစ်အောက်ကလေးငယ်များအား လုံခြုံမည်ဟု ယူဆရသည့် အဖြူရောင်စာရင်း ကြော်ငြာ ads စာရင်းတွေကို များကို ထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။
ယင်းကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး Google မှ “ကျွန်တော်တို့ applications တွေကို ဖယ်ရှားပစ်ပြီးပါပြီ။သူတို့ကို installed လုပ်ထားပြီးသားသူတွေကိုလည်း ပြင်ထန်တဲ့ သတိပေးချက်တွေ ပို့ပေးသွားမှာပါ။ အသုံးပြုသူတွေ အန္တရာယ်ကင်းအောင် ဆောင်ရွက်ပေးရတာ
ကျွန်တော်တို့ ကြိုက်နှစ်သက်ပါတယ်” ဟုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Google မှ ထိုပြဿနာ Android Security ပိုင်းကို မခုခံဖို့နဲ့ ဖုန်း devices များအား ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ထိန်းချုပ်ထားခဲ့သည်။
ဖျက်ပစ်လိုက်သော Applications များကို အသုံးပြုသူအရေအတွက်မှာ ၃သန်းမှ၇သန်းအထိ ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့ the researchers citing Google Play data (Google Play ၏ အချက်အလက်ဆိုင်ရာ သုသေသီများ) က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ applications များစာရင်းတွင် five Nights Survival Craft, San Andreas City Craft နှင် အခြား applications များလည်း ပါဝင်သည်။ Applications တွေရဲ့ နာမည်စာရင်အတိအကျကိုတော့ မဖော်ပြထားပါဘူး။ဒါပေမယ့် သင့်ဆီမှာ အဲ့ဒီ fake security နဲ့ application တွေရှိနေရင်တော့ Google ရဲ့ သတိပေးချက်တွေရောက်လာမှာပါ။
Via – 1, 2, 3
V30 ကို AI Feature နဲ့ MWC 2018 မှာမိတ်ဆက်မယ့် LG!
Live Video တွေကို Direct မှ ဝေမျှလို့ရနေပြီဖြစ်တဲ့ Instagram